Rudzi: Zvirwere, Mishonga
Azithromycin kana Yakapetwa? chiremba akati nditarise sarudzo yemutengo, ndiri mukushamisika, asi watengei? chinhu chimwe chete, chakapetwa chete "chinotengeswa" nevamiriri vezvechiremba, saka zvinoda ma400 rubles, uye ...
Chii chekuita nekutsva? zvinorwadza! zvinondirwadza kuita chimwe chinhu…. Kupisa kwakasiyana. Kana iko kupisa kuri kupisa (kubva kune kenduru semuenzaniso), saka unogona kushandisa Panthenol (uku kana iri yakakura munzvimbo). zvikuru…
Bendekete ratobudikira kare ka2 handizive kana kuchinjika kana kwete, imarii yandiri kuda kuvhiyiwa, sezvo membrane (muromo) yakabvaruka, arthroscopy yakasonerwa, ini pachangu ndiri kutambura neiyi yatove nemakore gumi nemashanu, ...
Kune rumwe rudzi rwebhora munzeve. Ndine zvakafanana. Iwe unofanirwa kumirira zuva uye zvese zvinozozivikanwa, zvikasadaro iwe unofanirwa kuona chiremba. Kutaurirana nachiremba anovhiya. Atheroma inonzi maficha anokonzerwa ne ...
Zvekuita kana ma lymph node mumutsipa azvimba. Ungarapa sei, zvirinani pasina majekiseni. Asterisk inogona kuzorwa nemafuta here? Chero zvazvingaitika, kukiriniki. Kuzvimba kwema lymph node, ichi hachisi icho chikonzero, asi ...
Bundu mukati medama, padhuze nepfupa Izvo zvakanaka, ndeye stomatitis. Kune mushonga stomatodin, zvinoita. Izvo zvinodikanwa kuti usuke - uye zvichapfuura. Izvo zvinogoneka nemishonga yemakwenzi. Tarisa muGoogle "stomatitis" uye nzira dzekurapa (kuchenesa). ...
ndiudze masiki akareruka emakwenzi pamba Hazvisi izvo !!!! YANGU NYAYA KUTI NDAKABvisa SEI ACNE MU1 VHIKI Handina kumbofunga kuti ndaizonyora ruzhinji kukwirira, ...
Endometriosis inogona kurapwa sei nemishonga yevanhu? Unoziva, Svetlana, sechiremba chiremba, ndaigara ndichishamisika nekusaziva kwekutsvaga dzimwe nzira dzekurapa. Kune anotanga, echinyakare nzira ndeyekugezera uye vodka. Uyezve, iwe unofunga ...
mukoma vanoitira weti kuhope vapedza doro ndoita sei? Vanhu vazhinji mushure mekunwa doro uye tsvina mumabhurugwa avo ... Usachanwa zvekare, rega kuverenga mabhuku kunogona kubatsira kuchinja pfungwa dzako ... Ingori doro pa ...
Ndiudze, unogona here kunwa doro kana doro kana ukatora glycine? Hapana chinotyisa chichaitika ... Asi iwe haugone kuwana iko kurapwa. hazviiti Uye sei wobva wagamuchira? Zvinowanzoitika ...
sei zvichindikuvadza kuenda kuchimbuzi pane diki? Kazhinji cystitis, ichiri kumhanya. Zvirinani kuenda kuna chiremba zvakadaro, uye zvirinani kuna gynecologist. Mushonga wacho wakareba uye ...
ndeapi mahwendefa APSELAN uye SUDAFED ?? ndedzipi zvirwere zvavanotorwa? Iyo mishonga yawatumidza yakashandiswa zvakanyanya kugadzirwa kwekugadzira amphetamine uye methamphetamine narcotic zvinodhaka ...
Niacin uye mavitamini B1 uye B6 anoenderana here? Ehe, iniwo ndakakanganwa kunyora, mavitamini, ascorbic acid uye nicotine - jekiseni zvese nemajekiseni akasiyana uye mumagaro akasiyana. Allergy vanorwara vari nani pakuita ...
Neurologists !! ! Zvinorevei kuti chirevo "kusangana kwakaneta"? Izvi zvinorevei?
Neurologists !! ! Zvinorevei kuti mutsara wekuti "kusangana kwakaneta"? Izvi zvinorevei? Julia! Izwi rine zvarinoreva kubva ophthalmology kusvika kune neuroses, kubva mune zvematongerwo enyika kusvika mune zvematongerwo enyika. Ko? Kushaikwa (kushaya simba) kwekubatana ...
Heterochromia ine njodzi here? Ruvara rweiri iris runoenderana nezvakanangana nemelanin uye kuwanda kwemashinda ayo. Melanin inotora mwaranzi inonzi ultraviolet, inodzivirira kukuvara kwemwaranzi. Iwo makuru eziso mavara bhuruu, grey, bhuruu, ...
Sei tsoka dzangu dzichitonhora? ropa pamwe harikwani makumbo angu zvakanaka, iniwo ndine mamiriro akadaro zvikonzero nei maoko nemakumbo zvichitonhora chero nguva yegore. Asi zvakadaro zvakanyanya ...
Doro rinokanganisa sei chiropa neitsvo? Chaizvoizvo zvinoparadza. Hazvina kukwana here? ethyl doro uye zvigadzirwa zvaro zvine mhedzisiro inokuvadza pane mamiriro echiropa maseru, zvishoma nezvishoma zvichikonzera kuparadzwa kwavo kwakazara. Muchoto ...
Tubercle bacillus inofa panotonhora zvakadii? Chirwere chinokonzera pulmonary tuberculosis tiberculosis bacillus (Koch's bacillus, mycobacterium tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, KUM, TB, CD), hutachiona hwakanyanya uye husinga peri. Wande yaKoch inokwanisa kureba ...
Novopassit? Chii chinonzi Novopassit? mushonga unonyaradza wemakwenzi. Novo-Passit mushonga wekunetseka kwekutya. Kutenda kune yakasanganiswa nzira (iyo gadziriro ine dzakasiyana mishonga yekurapa), zviri ...
Nzira yekurapa kuzvimba kwehutatu? kwete mishonga yekudyara chete, asi mishonga inoshanda.
Kurapa sei kuzvimba kweturiginalinal nerve? chete kwete nemishonga yevanhu, asi nemishonga inoshanda. tanga waenda kuna neuropathologist. Damn, ndanga ndichikwira madziro kwemakore gumi…. Zvemishonga - finlepsin (aka carbamazepine, ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 4,974 masekondi.